नन्दिता के.सी. बाट केकी अधिकारी - साप्ताहिक
नन्दिता र केकीको पहिलो भेट चार वर्षअघि एउटा म्युजिक भिडियोको छायांकनका सिलसिलामा भएको थियो । त्यसपछि उनीहरू नजिकका आफन्तसरी भए । सिनियर भएकाले नन्दिता केकीलाई बहिनी मान्छिन् भने केकी उनलाई दिदी भनेर सम्बोधन गर्छिन् । बहिनीलाई दिदीले विभिन्न सरसल्लाह पनि दिन्छिन्, तर मान्नु नमान्नु उनको विचार । हालै हङकङमा सम्पन्न एउटा एवार्ड कार्यक्रममा पनि यी दुई अन्य नायिका सखीहरूसँग निकै रमाएका थिए । हाल चलचित्र 'बागमती'को छायांकन सकेर 'हाउ फन्नी'को छायांकनका लागि तयार भैरहेकी केकीका बारेमा चलचित्र 'लोग्ने मान्छे'को डबिङका क्रममा भेटिएकी नन्दिताले यसरी कुरा काटिन् :
जोली स्वभाव : परिचितहरूसँग मात्र जिस्कने र ठट्टा गर्ने अनि सधै हाँसिरहने उनको स्वभाव राम्रो लाग्छ ।
फरक स्वर : उनको आवाजमा एक प्रकारको मिठास् छ, जसले उनलाई आफ्नो फरक शैली विकसित गर्न मदत गरिरहेको छ ।
मनको सफा : उनको मनमा कपट छैन र कसैको चित्त दुखाउन नचाहने स्वभाव छ ।
कुशल नृत्याङ्गना : केकीमा नृत्यका स्टेपहरू सहजै टिप्न सक्ने अदभूत प्रतिभा छ ।
राम्रो अभिनेत्री : उनी चलचित्र वा म्युजिक भिडियोमा दिइएको भूमिकालाई दुरुस्तै उतार्न सक्ने खुबी भएकी प्रतिभाशाली अभिनेत्री हुन् ।
जसको कुरा पनि पत्याउने : जसले जे भने पनि 'होला नि' भन्दै पत्याउने बानी छ ।
पहिरन छनौट : यदाकदाबाहेक उनी आफूलाई सुहाउने
पहिरनको रंग र डिजाइन छनौट गर्न चुकेकी हुन्छिन् ।
अर्काको सहयोग नै ठूलो : कसैको कामका लागि आफु प्रयोग भैरहेको समेत थाहा पाउँदिनन्, अरूलाई सहयोग गर्दा आफ्नो काम बिगि्ररहेको पनि पत्तो पाउन्नन् ।
जुनबेला पनि फेसबुक : मोबाइलमा जतिबेला पनि फेसबुक चलाएर बस्छिन्, अरू तिर पनि ध्यान दिए हुन्थ्यो नि !
कुरा लुकाउन नसक्ने : कतिपय कुरा लुकाउनु नै बुद्धिमानी ्र
हुन्छ । उनी भने अलिकति चिनाजानी भयो कि सबै कुरा सुनाउँछिन् ।
शंकर अधिकारी घायल, लेखक/गीतकार